Iko hakuna kuramba izvo chaiyo chaiyo yekutamba inyika yese yekunakidzwa. Iko zvakare hakuna zvakawanda zvezviitiko zveVR zviri nani pane izvo zviripo pane HTC Vive, Vive Cosmos uye Urarame Pro.
IHTC Vive, chero yemhando iwe yaunayo, chinhu chinonakidza kit, zvechokwadi. Izvo hazvireve, zvakadaro, kuti hazvigoneke kuzvivandudza pamwe nehunyanzvi hwakatora kukwidziridzwa, zvakabatanidzwa uye zvishongedzo.
Isu tanga tichivhima pasi akanakisa mabheti kit kuti iwe utenge kuita yako VR mitambo yekutamba ifare zvakanyanya.
Leap Motion ruoko rwekutevera
Yepamberi ruoko uye minwe yekutevera yeVR
Kurumidza-kururamisa, yakaderera-latency VR kutonga
Inotsiva vatungamiriri vakajairika
Iyo Leap Motion yekutevera chishandiso yakatangwa makore mashoma kumashure uye ndokuvimbisa Minority Report maitiro ekudzora emakomputa edu uko isu taizokwanisa kusimudzira maoko edu kutenderedza kudzora izvo zvataiona uye nekudyidzana nesoftware maficha. Iyo tekinoroji haisati yatumbuka zvizere izvozvi, asi isu tinogara tichifara kuiona ichifambira mberi.
Iye zvino iyo tekinoroji yekutevera tekinoroji iri kuiswa kushandiswa mune imwe nzvimbo iri kusimukira yehunyanzvi - Virtual Reality. Nekuisa mudziyo weLeap Motion kumberi kweHTC Vive, unogona kukanda vatongi vako veVR uye kunyudza muVR nyika umo maoko ako anoshandisa mashiripiti. Zvirinani, ndicho chivimbiso.
Iyo Leap Motion controller ndechimwe chezvinhu zviri nyore zvekuisa pane yako HTC Vive. Ingo namatira doko kumberi kwe headset yako, popa iyo Leap Motion controller mukati uye uiisa mune yakasarudzika USB chiteshi paPC yako uchishandisa refu yekuwedzera tambo uye iwe usipo. Ehe, pane zvimwe zvinodiwa software yekurodha pasi nekumisikidza, asi iyo setup imwe nzira imhepo yakazara.
Kubva ipapo iwe unobva wakwanisa kuyedza dzakasiyana siyana dzakasiyana zviitiko zvinowanikwa kune kurodha mahara kubva kune webhusaiti yekambani.
Zvatinoda zvezviitiko zvazvino zviri chaizvo Katsi Explorer uye Blocks. Cat Explorer inoita kuti iwe utore uye ufambise mukati meiyo furry feline, iine kugona kuona mukati uye kubvisa kumashure mashure ekuona mapfupa ayo, nhengo dzakakosha uye nezvimwe. Iyo yakajeka diki tech demo iyo inoratidza iyo ingangodaro yekudzidzisa inoshandisa VR inogona kuve nayo munguva pfupi iri kutevera.
Mabhokisi, zvakadaro, iri demo yakapusa yezvinobvira nemaoko ako. Kugadzira zvinhu zvehukuru hwakasiyana kubva kunze kwemweya mutete nemaoko ako asina maoko kunonakidza. Isuwo taifarira kugona kushandisa giravhiti - kukanda zvinhu zvatainge tagadzira mumhepo chete kudzosera giravhiti kumashure kuti vadzike pasi pasi nehumhu.
Ehezve, izvi zvese zvinongova tech demos panguva ino. Ivo zvechokwadi vanofanirwa kutamba vachitenderera pamwe uye nekunakidzwa kwakawanda kuzviita futi, asi ivo havasi akazara mitambo izvozvi. Izvo zvakati, iwe unogona zvechokwadi kuona kugona kweiyi tech uye chii chingaitika kana VR mahedhiyo magadziri akatanga Vaka iyo yekutevera mumusoro mavo chaimo.
Parizvino, iyo Leap Motion inodzora-yemahara VR ruzivo inovimba nevavaki kuti iite chokwadi. Kune akatiwandei emitambo uye zviitiko zviripo izvozvi:
Giravhiti Sketch VR
Wave Mashiripiti VR
Uye vamwe vanofarira vakatokwanisa kugadzirisa mimwe mitambo kuunza rutsigiro sekuisa mabhatani anodzvanywa ari mudhara reWW2 ndege muIL-2 Sturmovik: Hondo yeStalingrad. Sezvo kufarira kunoungana tinotarisira kuona iyi runyorwa ichikura pamwe chete nekirabhu yekuwedzera yezviitiko zviripo kubva kuLeap Motion pachayo.
Kana iwe uchifarira kuyedza isina-control VR uye uchida kuona kuti zvichave zvakaita sei kukwanisa kushandisa maoko ako zvakasununguka muchokwadi chaicho, ipapo iyo Leap Motion controller zvakakodzera kutenga. Iyo ndeimwe yeanodhura HTC Vive zvishandiso zviripo panguva ino.
Deluxe Audio Sungira
Yakareruka-kushandisa-saizi yekugadzirisa dial
Kumwe kwekushungurudzika neyakajairika Vive ndiko kuda kushandisa yako nhare kana mahedhifoni. Isu takave nematambudziko ekuwana yakakodzera USB inotya mahedhifoni uye kushandisa 3.5mm jack kwaireva kukanganisa neakawanda tambo.
Iyo yakajairwa kunze-kwe-iyo-bhokisi Vive zvakare inguva yekukakavara kuisa uye kubvisa. Iyo katatu Velcro tambo sisitimu yakanaka kune yekugadzirisa, asi iri zvishoma faff.
Kana iwe wakanzwa kusuwa kwematambudziko aya, saka iyo Deluxe Audio Strap ndiyo inosimudzira iwe. Ichi chishongedzo chinotsiva tambo dzakasarudzika uye chinosanganisa odhiyo chaimo mukugadzirwa kwemusoro.
Izvi zvine bhenefiti dzinoverengeka - chekutanga kukosheswa kwemusoro kwakanyanya kugadzikana; padding uye dzimba dzeplastiki dzinobvumidza yakagadziridzwa kuyerwa kugoverwa uye kushoma kumanikidza pane iko kukwikwidza iwe uchinge uchitamba.
Iyo yakavandudzwa musoro tambo inoitawo kuti headset ive nyore nyore kushandisa neyakagadziriswa kugadzirisa vhiri kumashure ichitsiva matatu tambo tambo. Kumonyoroka kweiyi dial kunosunungura kana kuomesa mahedhifoni kuti ikurumidze kuwana kukwana kwakaringana kana kuti iite yakafara zvakakwana kuti itsvedze muchiedza.
Chinotevera chinoratidzira ndeye yakasanganiswa odhiyo. Yakareruka flip-pasi nzeve makapu anogara panzeve iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita. Aya maearphones akasanganiswa anoreva kuti haufanire kushandisa yako wega. Iyo dhizaini zvakare inoreva tambo shoma munzira iwe kana iwe uchitamba mutambo, iyo inogara iri bhonasi.
Izvi zvinowedzera kwete chete kunatsiridza ruzivo rwekuteerera rweHTC Vive, asi nyaradzo zvakare. Isu takawana izvi zvaireva kunyudzwa zvirinani panguva yemitambo mitambo uye yakanyanya kudzvinyirira kumeso, zvese zviri zviviri zvinogamuchirwa zvinowedzerwa kune yatove inoshamisa system.
TPCAST ​​Wireless VR adapta
Wireless VR kusimudzira yeHTC Vive
20,100mAh bhatiri rinotakura isina waya VR
IHTC Vive inogona kunge iri imwe yeakanakisa eVR kutenderera, asi ichiri kuda muchina wekutamba wakakura kuti umhanye uye iwe unofanirwa kusungwa kumuchina iwoyo iwe uchiridzawo. Izvi zvinogona kunyatso kukanganisa chiitiko kana iwe ukasungwa mumatare sezvo iwe uchitamba, kunyanya mumitambo inotyisa kana kungogumbura paunenge uchinzwa ichikwenya kumusana kwemusoro wako nguva dzose.
Apa ndipo panopinda TPCAST ​​waya yemagetsi isina waya. Izvi ndizvo kusimudzira isina waya kune yako HTC Vive iyo inokutendera iwe kudzikisa tambo idzo dzinodzivirira mukufarira ma transmitter asina waya uye vanogamuchira, pamwe neinopisa-inogona kuchinjika bhatiri pack iyo inokwanisa seanosvika maawa mashanu ekutamba isati yada kudzoreredzwa.
HTC Vive isina waya: Maitiro ekuvandudza yako headset yeVR uye dzonga tambo idzodzo
TPCAST ​​ndeye aftermarket kukwidziridzwa kune iyo HTC Vive iyo inokodzera kufunga nezvayo. Haisi yakachipa, asi inonakidza.
Isu takawana iyi isina waya yemagetsi yakaburitsa mimwe mibairo inoyevedza, iine shoma shoma munzira yekuonekwa lag kana furemu rate madonhwe patakatamba. Haisi isina zvikanganiso zvayo - pane hapana yepamutemo maikorofoni rutsigiro izvozvi uye zvinogona kunetsa kana bhatiri rikabuda kunze kwemuto pakati pemitambo yekutamba (kunyanya uchifunga kuti zvinotora maawa angangoita gumi kuti iite recharge zvizere). Asi chinhu chinopenya kit iyo inoshanda chaizvo.
Hatigone kukuudza zvakakwana kuti yakanaka sei isina waya VR yemitambo iri. Hapana chakafanana nerusununguko rwekufamba famba usinga gumbure tambo kana kunzwa iko kungogara kweye tambo dzakabirirwa.
Iyo yekudzikira iri kuve inorwadza kuziva yemitambo miganho uye kwete kugogodza pamusoro pezvakakosha zvemumba zvinhu isu tichitamba.
HTC Vive yepamutemo isina waya adapta
Inoshandisa Intel's WiGig isina waya tekinoroji
Inoda kadhi rePCI-e rakaiswa mumushini wako
Inoshanda nezvose zviri zviviri HTC Vive uye HTC Vive Pro
Inotsigira 6m x 6m (20ft x 20ft) nzvimbo yekutamba
Kusvikira kuma2.5 maawa bhatiri hupenyu kubva kune 5700mAh bhatiri pack
Seimwe nzira kune TPCAST ​​Adapter, newewo ikozvino une sarudzo yekutenga iyo yepamutemo HTC Vive isina waya adapta. Ichi chishandiso chinoshanda nenzira imwechete asi chinonunura zvishoma zvirinani (uye zvinotsigirwa zviri pamutemo) mhedzisiro.
Iyi sisitimu inoshanda nezvose zviri zviviri HTC Vive uye HTC Vive Pro - inoda kutenga kwakasiyana kune yega. Izvo zvinoita kuti ive sarudzo yevaridzi veVive Pro avo vasingakwanise kuwana isina waya kusvika pano.
Uchishandisa Intel's WiGig tekinoroji, yepamutemo isina waya adapta inoshandura yako yekubatanidza bhokisi kune isina waya inogamuchira / inotepfenyura iyo inogara pamusoro pemusoro wako iwe uchitamba. Hauchadi kunetseka nezve kubaya chero chinhu mune yako yakajeka kadhi kana kunyatso kubatanidza yako Vive kune yako yemitambo muchina kuburikidza chero waya.
Iyo sisitimu inobata zvese nekutenda kune iyo PCI-e adapta yakaiswa mumushini wako. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi savvy kuitira kuti ugadzire uye ushandise iyi sarudzo uye haishande nemalaptop, asi inobvumidza kumwe kunoshamisa kupenya kweVR yemitambo pasina kubereka kwetambo.
HTC Vive Wireless Adapter ongororo: VR tambo yekucheka pazvakanyanya
Iwe haugone kuwana yakanyanya nguva yekutamba kunze kweiyi adapta uchienzaniswa neiyo TPCAST ​​sezvo bhatiri pack iri diki zvakanyanya, asi isu takaiwana ichikwanisa kwazvo, iri nyore kushandisa uye iri nyore chaizvo kupara panguva yekuyedzwa.
Easy-to-kuisa lens adapters
Prescription lenzi yemagirazi-emahara VR yemitambo
BlueGuard yekupfeka kuvharira kunze iyo yakaipa mwaranzi paunenge uchitamba
Kana iwe uri akapfeka magirazi saka iwe unoziva kushungurudzika kunouya nekuedza kupfeka VR headset pamusoro pemapiritsi ako ekunyora. Hazvina kungogadzikana chete, asi zvakare zvinowanzoendesa kumatambudziko maviri ne smudges, kuzora uye kupisa.
Nhau dzakanaka ndedzekuti hazvifanirwe kunge zviri nenzira iyi. Izvo zvinokwanisika kukwidziridza yako HTC Vive uye wedzera mishonga yemarensi maadapter kuitira kuti iwe ugone kutamba pasina magirazi ako.
Aya maadapter anowedzera kuwedzera kune yako headset. Ivo havangobvumidze iwe kuti utambe pasina ako specs, asi ivo zvakare vanopa imwe dziviriro kune malenzi ivo pachavo Kana iwe uchikwenya akajairwa lenzi, iwo haasi nyore kutsiva, saka zvakakodzera kuti uzvichengetedze uye maadapter anokumisa iwe netsaona uchikwenya iwo nema standard specs ako.
Kune mashoma mashoma masosi ezvinyorwa zvemalensi emhando dzakasiyana dzeVR misoro kunze uko. Tinokurudzira VR Lens Lab. Iyi kambani haingopa chete mapiritsi emarenisheni emishonga asiwo inopawo zvimwe zvekuwedzera senge Blueguard kupfeka iyo inodzivirira maziso ako kubva kubhuruu mwenje mwenje paunenge uchitamba.
Ehezve, malenzi anodhura zvakaringana neyako yakajairwa tsamba yemalensi, saka mitengo ichasiyana zvichienderana nekuipa kwemeso ako, asi mupfungwa medu, inokodzera kukwidziridza yemutambarakede, inonyudza yeVR yemitambo.
3dRudder inofamba controller
Tsoka rinodzora kufamba
Multi-mutambo uye mudziyo unoenderana
Isu tiri vatsigiri vakuru veRoom-Scale VR yemitambo. Zvakanyanya kunyudza kana iwe uchigona kufamba-famba muVR yepasirese, nekufamba-famba mune chaicho chaicho. Dambudziko neizvi kunyangwe riri kukurumidza kuneta. Isu kazhinji takawana chikamu chedu chemitambo chakatapudzwa nekuda kwekurwadziwa tsoka kana musana unorwadza.
3dRudder inopa inonakidza mhinduro kune iri dambudziko nekukubvumidza iwe kudzora yako yemukati-mutambo kufamba netsoka dzako uchiramba wakagara.
Zorora tsoka dzako pane ino inofamba controller uye iwe unogona kungonyika, kumonyanisa kana kutendeudza tsoka dzako kuti utamise hunhu hwako nezve mumutambo weVR. Nekufamba kuri nyore, gumi nerimwe unokwanisa kufamba, kumhanya, kuneta kana kungofamba famba zviri nyore.
Iko pasi peiyo 3dRudder yakatetepa zvishoma ichikubvumidza iwe kuti uzununguse nyore mune chero nzira. Izvi zvinoreva kuti haugone kushandisa chishandiso ichi chakamira kunyange, nekuti hausi kuzochipaza chete asi ungangodonha kumeso kwako zvakare.
Ichi chishongedzo chiitiko chinonakidza. Yakavakirwa-mukati yekumanikidza maseru anonyatso kuteedzera kufamba uye kuendesa iro ruzivo mumutambo. Iyo inogona kana kuona kana iwe ukatsikitsira pasi kana kusimudza tsoka dzako kumusoro uye izvi zvinogona kushandiswa kutenderera zvichidzika zvakare. Izvi zvinovhura kushandiswa mukubhururuka sims futi uye chero mutambo uyo unoda joystick.
Ehezve, mazhinji emazuva ano emitambo yeVR anopa ekudzora-akavakirwa mafambiro ekudzora kuburikidza neiyo trackpad kana matanda ekudzora, asi kushandisa tsoka yekudzora inosunungura maoko ako kune zvakakosha / zvinonakidza zvinhu - sekunge kupfura, kupamba uye kuita nenyika.
Isu takaonawo kuti 3dRudder yakabatsira kuchengetedza kunyudza uchitamba sekudzora kufamba nemakumbo ako uchingozvikweretesa zvakasununguka kuVR yemitambo, kunyangwe kana usiri kunyatsofamba munzira yakajairwa.
Nemitambo inomhanya-mhanya uko nekukurumidza kufamba kwakakosha kupona, isu takawanawo 3dRudder yakaita kuti tikurire zvakanyanya pane kuyedza kutenderera neyakajairika mafambiro ekufambisa.
3dRudder inochinjika futi. Hazvina chete inoenderana nemhando dzakasiyana dzemitambo yeVR kunze kwebhokisi, zvinoitawo kuti shandisa mutungamiriri nenzira dzakasiyana siyana kusanganisira keyboard modhi, mbeva nzira, joystick modhi nezvimwe. Izvi zvinoreva kuti zvinokwanisika kuishandisa kudzora mitambo yese, kwete maVR chete, asiwo segonzo guru rekutarisa internet kana iwe uchinzwa zvakadaro.
Ese marongero akanyatsogadziriswa ne software inoperekedza, saka imhepo kuimisa nenzira yaunoda iwe.
3dRudder inosangana nemuchina wako wemitambo uchishandisa plug-uye-kutamba USB tambo. PC yako inofanirwa kuiziva nekukurumidza semufaro, asi software yacho inokutendera kuti utore marongero kune ako aunofarira uye mitambo yauri kutamba zvakare.
3dRudder inonzwisisika intuitive uye nyore kutora uye kushandisa. Izvo zvakare hazvina kuganhurirwa mukushandisa kweVR, saka kana iwe usiri kutamba mukati meVive yako unogona kuiisa pakushandisa zvakanaka kumwe kunhu zvakare.
Hyperkin Kudzivirirwa Kesi
Isu tiri vateveri veVR hombe, uye iyo Vive ndeye stellar system, asi zvakanaka kutaura kuti hatidi kuishandisa kakawanda pazuva, mazuva ese. Inogona kudya yako nzvimbo uye kupinda munzira kana iwe ukagadzika kumusoro nguva dzese. Nyaya yekudzivirira kana iwe usiri kuishandisa inofanirwa, saka, kuve nechokwadi chekuti haupere netsaona uchipaza chimwe zvacho uye kutambisa mari yako.
Iyi kesi kubva kuHyperkin inogona kukodzera yako headset, macontroller nema sensors ese ari muhombodo imwe, uye haina kunyanyisa kukura kana kushinga sebhonasi. Iko kudyara kwakanaka kune chero muridzi weVive.
Iyo HTC Vive inoita kunge iri kuwedzera modular nguva dzese, iine zvimwe zvinhu zvaunogona kuwedzera pane yako system kuvhura maficha matsva uye sarudzo. Imwe yekuwedzera yakadaro inogona kuve Vive Tracker. Iyi nifty diki gizmo inogona kunamatira kune chero chaunoda kuita icho chinhu, gumbo kana chinhu chinoteedzereka muVR paunenge uchichifambisa.
Tichave tichivandudza iyi runyorwa mune ramangwana nezvimwe zvakatowanda zveVive yako, saka ive shuwa yekutarisa kumashure kuti urambe uri muchiuno.